Layma's World: Online ပေါ်က ညီမလေး...
Posted by lay-ma at 7:04 AM
သူ့အတွေးနဲ့သူပြောလိုက်တာဟုတ်နေသားပဲနော်။ ဆုံးမမဲ့လူတောင်ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ :D ။ ကောင်းတယ်အစ်မရေ။ နောက်လည်းဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
ကျနော့် ပြောတော့ ဆညးချက်တယ်တဲ့ တီလေးလဲဆားချက်တာပဲ...ဒါနဲ့ ဘယ်တော့အွန်လိုင်းတတ်တာလဲ ကျနော် addထားတာကျ accept မလုပ်ဘူး.. လိမ်ခံထိမှာကြောက်လို့ လားဗျ..
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်နေ့ လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ
စာလာဖတ်တယ်နော်။ အခုခေတ်လူငယ် အတွေးတွေကို ပြောပြတာကျေးဇူး။
ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်နည်းကို ပို့စ် တစ်ခုအနေနဲ့ တင်မလို့ဟာ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီလောက် မတတ်တာနဲ့ မလေးကို ပဲ တိတ်တိတ်လေးလာပြောပြမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အကြံပေးတာကို ပြောပြမှာနော်။
virsus တွေက USB flash drive, MP3, MP4, Memory card တွေက ၀င်တာများပါတယ်။ အဲဒီတော့ စက်ထဲမှာ antivirus တစ်ခုခု သွင်းထားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပေမယ့် Full version ကို တင်စေချင်ပါတယ်။ Trial version တွေက သိပ် effective မဖြစ်လို့ပါ။ Antivirus တွေထဲမှာတော့ NOD 32 နဲ့ Kaspersky ကို ညွန်းချင်ပါတယ်။ Norton က စက်လေးလို့ပါ။
ဲပြီးတော့ အဲဒီ flash drive တွေကို စက်နဲ့ ဆက် လိုက်ရင် Auto run ဆိုပြီး တက်လာပါတယ်။ အဲဒါကို cancel လုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ virus တော်တော်များများက auto.exe တွေဆိုတော့ ok နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စက်ထဲမှာ install ဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ။ အဲဒီတော့ flash drive တွေကို ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ ဆိုရင် My computer ကနေ ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့ flash drive ကိုထောက်ပါ။ ပြီးရင် virus scan အရင်လုပ်ပါ။ ပြီးမှ right click>explore နဲ့ဖွင့်ပါ။ အဲဒီနည်းက အန္တရယ် အကင်းဆုံးပါတဲ့။ အဲလို ဖွင့်ချင်းအားဖြင့် virus ပါလာသည့်တိုင်အောင် ကိုယ့်စက်ထဲမ၀င်တော့ပါဘူး။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ထိရောက်တယ်မဟုတ်လား။ အဆင်ပြေပါစေ မလေး/လေးမ/ မလေးမ :) (ဘယ်လိုခေါ်ရ မလဲ မသိလို့နော်။ :P)
ကိုကောင်းကင်ရေ လေးမ ပို့စ် ကိုလာဖတ်ပါအုံး။ အရင်က ပေးခဲ့တာတွေ အတွက် ပိုက်ပိုက် ပြန်တောင်း :P
ဟုတ်သလိုလိုတော့ရှိသား .. မလေးရဲ့.. အခုခေတ်ကလေးတွေဒီလိုလေးတွေတွေးနေတာပေါ့နော်.. ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါစေပေါ့ .. မလေးရယ်..
ဘယ်နေရာမှာ မဆို... စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရည် ရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲလေ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆိုတော့ ပိုပြီး အရေးကြီးတာပေါ့... လေ့လာအကဲခက်နိုင်စွမ်းကလည်း အရေးပါလာပြီ။ ကံတရားလည်း ပါသေးတယ်...
အဟဲ..မိုက်တယ်ဂျာ.. ပေါက်ပေါက်ပြောတာအားလုံးမှန်တယ်နော် တီတီလေး..:P လက်ခံလိုက်ပါကွယ်..နော်..နော်
good idea! nice post!
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ မမလေးထဲ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေတယ်လား၊ အဲ ဘွာတေး... မမလေးစက်ထဲ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေလို့လားလို့... :) သိုးလေးလည်း kaspersky ပဲ သုံးတယ်လို့ ကြော်ငြာဝင်တာ...
မှန်ပါတယ်။ သုံးတတ်ရင်ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင်ဘေးပေါ့နော်။
လေးမရေ... ရေးပြထားတာ ကောင်းတယ်.. အဓိက ကတော့ အပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ online မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင် သင့် မသင့်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ.. ခေတ်တွေကလည်း ပြောင်းနေပြီကိုး... :D
>၀င်္ကပါလေး.. ကောင်းလား ညီမလေး..။ကျေးဇူးနော်..။
>လိမ်ခံထိမှာမကြောက်ပါဘူး... ကြောင်မျိုးမှန်းမသိလို့ cancle လုပ်လိုက်မိတာ..။ ဆောရီး..ဆောရီး..။
>ကိုဇီးကွက် ... လူငယ်တွေကို အပြစ်ကြီးပဲ မပြောချင်ဘူးလေ ...နည်း၂ မျှမျှတတတွေးကြည့်တာ...။ ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ပြောပြသွားတာတွေ ကျေးဇူးပါ..။
>ကိုအတာ .. အချွန်နဲ့မ နေတယ်...။
>ညို ..ဆင်ခြင်နိုင်အောင် အုပ်ထိန်းသူတွေက သိမ်သိမ်မွေ့ မွေ့ပြောပြရမှာပေါ့လေ...။
>ကိုသန့် ..ဟုတ်တာပေါ့..အကဲခတ်နိုင်ဖို့နဲ့ ကံတရားကလည်း အရေးကြီးသေးတယ်..။
>သဇင် ... လက်ခံလိုက်ပါပြီ .. ညီမရေ...။
>သိုးလေး ... မမလေးကို ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်သွားတာ ...သိုးလေး အ၀တ်လျှောခိ်ုင်းလို့လေ...။ သိုးလေးက ကြော်ငြာမင်းသမီးလေးပေါ့...။
>မတူးတူး ... ဒါပေါ့..အဟုတ်ပေါ့... ။
>မနုစံ ... ခေတ်ပြောင်းတာကတော့ မမရေ..လိုက်လို့ကို မမီနိုင်ဘူး..။ :)
ဒီလို အချီအချ အပြန်အလှန် ပြောတဲ့ ပုံစံလေး မိုက်တယ်ဗျ ။ အွန်လိုင်းပေါ်က ဒေါ်လေး နဲ့ ဒီတစ်ပုဒ်လို အရေးအသားမျိုး ပေါ့ ။
ပေးချင်တဲ့ message ကို သွက်သွက်နဲ့ ထိရောက်သွားစေတယ် ။ အဲဒါမျိုး
အကြောင်းပေါ်ရင် ထပ်ရေးပါဦးဗျ ။
ဂျပန်ဘာသာစကားကို မွန်းမံသင်တန်း တက်ခဲ့တာအမရ..
သုံးတတ်ရင် အင်တာနက်... ချက်ရွန်းကကောင်းပါတယ်..
လူ ၁၀၀ ယောက်ရှိတယ်..ရီရတယ်ဗျ...
>sparrow... ဟုတ်လား... စွံလှချည်လား...ယောကျာ်းလေးမှန်း သိသွားတော့ရော ဘယ်နှစ်ယောက် ရည်းစားစကားပြောလဲ..(စာကလေးက ပြောတာ)
အဟတ် သိနေတယ် အဲဒါဘယ်သူ့ အာဘော်တွေဆိုတာ ...
လေးစားပါတယ်ဗျို့...။